Fametrahana Gazety Tokony ho Fantatrao | Famoronana an-tserasera
Amin'izao fotoana izao dia tsy mitondra na inona na inona ho anao izahay ary tsy misy afa-tsy ny sasany amin'ireo firavaka satroboninahitra amin'ny resaka famolavolana editorial. Tsy gazetiboky izay ho hitanao ao amin'ny efitrano fiandrasana mpitsabo nify izy ireo, ary na dia amin'ny toe-javatra sasany aza, na any amin'ny fivarotana gazety. Hampianatra anao ny sasany izahay santionany fandrafetana gazetiboky, fitambarana gazety tsara indrindra eran-tany.
Ao amin'ity lisitra ity, dia hahita andian-gazety, izay ho toy ny fanondro sy aingam-panahy rehefa mamorona ambaratongam-pahefana, lamina, fikarakarana ny sary sy ny typography, ny fampiasana tsara ny habaka, sns.
1 fandrindrana gazety tsara indrindra
1.2 Koba isan-karazany
fandrindrana gazety tsara indrindra
Ao amin'ity fizarana ity dia hotanisaintsika ny endrika gazety tsara indrindra eny an-dalambe sy amin'ny tontolo nomerika.
Ny gazetiboky TIME dia iray amin'ireo zavatra vita an-tsoratra malaza indrindra maneran-tany, dia gazetiboky misy tantara an-tsary mahavariana. Ny iray amin'ireo singa mampiavaka indrindra amin'ny famoahana dia ny endriky ny fonony, izay ahitana ny endri-tsoratra ao amin'ny afovoan'ny fonony sy ny singa manodidina azy.
Ao anatin'ilay gazety dia misy a rafitra sary tsara ary votoaty lahatsoratra tena mivelatra sy miasa tsara, ankoatry ny famolavolana infografika, sary, sns.
Miresaka momba ny a gazety maoderina manokana momba ny fiainana, afaka mahita na inona na inona ianao manomboka amin'ny fomba fandrahoan-tsakafo, tatitra momba ny famolavolana anatiny, hatramin'ny lahatsoratra momba ny maritrano baroque.
Ny voamadinika, dia fantatra amin'ny maha-boky madio sy tena hita maso, io no gazety mahazatra avelanay eny amin'ny talantalana satria mahafinaritra. Izy io dia manolotra endrika famoahan-dahatsoratra tena kanto, sary voakarakara tsy misy isalasalana izay mpilalao fototra amin'ny pejy feno maro, ary koa toerana fotsy mailo. Gazety mampiseho endrika avy amin'ny zorony efatra.
Ny Jot Down dia ahitana pejy 300 mahery eo anelanelan'ny fonony, hoheverina ho boky iray izy io. Ny fomba mampiavaka ny gazetiboky dia ny fampiasana mainty sy fotsy ary endrika hita taratra mandritra ny fanontana.
Ny lahatsoratra miaraka amin'ny fomba minimalist, manana drafitra tena mitandrina, ny infografika mahery indrindra amin'ny lafiny famolavolana, pictograms izay hamela anao amin'ny vavanao misokatra ary fomba kanto toy izany no mahatonga an'i Jot Down ao amin'ity lisitra ity ho iray amin'ireo endrika tsara indrindra amin'ny gazetiboky.
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny Metropoli isika, dia ny fanampin'ny fialam-boly sy kolontsaina natolotry ny gazety El Mundo, ka azonao atao ny manana an'ity ao amin'ny kiosk.
Rodrigo Sánchez no mpamorona ny tonian-dahatsoratra eo amin'ny kodiaran'ity famoahana ity, ny tena mampiavaka azy ireo dia ny fomba ifampifangaroan'ny fonony amin'ny lohahevitra lehibe hokarakaraina.
Iza no tsy mahalala na mbola nandre ny gazety ara-barotra malaza indrindra eran-tany. Tonga tany Espaina tany amin'ny 2013 tany ho any i Forbes, ary nanomboka teo dia iray amin'ireo gazety novidina indrindra tamin'ny gazetiboky.
Ny famolavolana ity gazety ity dia mampiavaka ny fampiasana litera lehibe sy boaty kely amin'ny fonony, izay efa anisan'ny mampiavaka azy. Ao anatiny dia afaka mahita sary voakarakara tsara isika, lalao typography toy ny lohatenin'ny vaovao, haingo amin'ny blocs lahatsoratra, palette loko samihafa, sns.
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny a Famoahana ny zavakanto sy ny kolontsaina, izay niseho voalohany tamin'ny taona 2009. Ny Elefanta dia mivoaka isaky ny telo volana, ary miparitaka manerana an'i Eoropa sy any amin'ny toerana hafa toa an'i Shina, Korea, Japon, Etazonia ary Kanada.
Ny elefanta, dia tsy azo ihodivirana amin'ny azy kalitao sy fikarakarana amin'ny famolavolana ny modely, ny fampiasana toerana banga dia tsy mampino, ankoatra ny fitsaboana sy ny famolavolana rehetra izay ananany.
Tapas dia a gazetiboky momba ny gastronomie sy ny fironan'ny trano fisakafoanana, natokana ho an'ireo antsoina hoe foodies, ho an'ireo tia hanina tsara. An'ny vondrona mitovy amin'ilay efa hitantsika teo aloha, gazety Forbes, ao amin'ny vondrona Spainmedia.
Tapas, dia publication izay fomba feno fahasahiana sy mahafinaritra dia mamirapiratra miaraka amin'ny endrika famoahan-dahatsoratra tsy misy kilema. Misy dikan-teny amin'ny teny espaniola sy iraisam-pirenena hafa.
Tonga ny fotoana nandaozan'ny gazety ara-panatanjahantena ny fomba lany andro toy izany, ny gazetiboky toa an'i Panenka dia nanokatra ny varavarana hamolavola ao anatin'ny pejiny. Gazety iray izy io, ary hita ao tantara momba ny baolina kitra izay tsy miseho amin'ny gazety lehibe na amin'ny vaovao amin'ny fahitalavitra, voafono amin'ny endrika famoahan-dahatsoratra manana kalitao tsara indrindra.
Nandritra ny taona maro, ity boky ity dia niasa toy ny aingam-panahy amin'ny sehatra roa toy ny famolavolana sary sy ny dokam-barotra iraisam-pirenena. Novum, dia gazetiboky iray mivoaka isam-bolana ary mampiseho ny tsara indrindra amin'ny endrika ankehitriny, fanoharana, sary, famolavolana orinasa, ankoatry ny sehatra hafa.
Teraka tamin'ny taona 2016 tany Milan, ity gazety ity dia anisan'ireo boky momba ny dia, anisan'ireo pejy hitanay sary manasa antsika hivezivezy, ankoatra ny fanolorana antsika zotra samihafa manerana ny planeta.
Ny tsirairay amin'ireo dika mitovy amin'ny hakitroky mitovy, pejy 300 eo ho eo, Cartography, dia manasa antsika ho any amin'ny toerana tsirairay izay asehony antsika, amin'ny alalan'ny lahatsoratra fampidirana, sarintany misy fandrindrana ary tatitra feno momba ny sary.
Nahazo loka tamin'ny 2016, ho iray amin'ireo gazety tsara indrindra amin'ny taona. Ity lahatsoratra ity Izy io dia mifototra amin'ny zavatra andavanandro ary manaparitaka azy toy ny fizaran'ny Bones.
Ny mpamorona Sandra Kassenaar no miandraikitra izany manambatra ny tsara indrindra amin'ny endrika fanontana ankehitriny amin'ny pejy tsirairay, izay ahitana lahatsoratra lehibe, mizara ho tsanganana amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny sary feno ra feno na pejy roa isan-karazany.
Hatreto ny safidintsika ny ny endrika gazety tsara indrindra ankehitriny, azo antoka fa namela ny sasany izahay, koa aza misalasala manoratra aminay hoe inona no endrika tsara indrindra amin'ny gazetiboky ho anao, izay ampiasaina ho fanondroana ny tetikasanao amin'ny famolavolana lahatsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fametrahana Gazety Tokony ho Fantatrao
Fandaharana tsara indrindra hanaovana sary mihetsika